'Boqoradda Faanta Maroodiga' oo lagu xiray Tanzania - BBC News Somali
'Boqoradda Faanta Maroodiga' oo lagu xiray Tanzania
Yang Fenglan waxay ahayd ganacsato caan ah
Dowladda Tanzania, ayaa xabsiga u dirtay Yang Fenglan, oo ah ganacsato u dhalatay dalka Shiinaha, oo lagu naaneyso "Boqoradda Faanta Maroodiga", waxaana lagu xukumay 15-sano oo xabsi ah.
Waxaa lagu eedeeyay inay si sharci darro ah u dhoofineysay boqollaal faanta maroodiga ah.
Yang, ayaa lagu eedeeyay inay ka shaqeyneysay mid ka mid ah shabakadaha Africa ugu weyn ee suuq geeya faanta maroodiga, waxaa la sheegay inay mas'uul ka yihiin ka ganacsiga faan maroodi oo qiima ahaan lagu qiyaasay 2.5m oo dollar, (£1.9m), oo laga soo gooyay 400 oo Maroodi ah.
Labo nin oo u dhashay dalka Tanzania, ayaa lagu helay danbi ah inay la shaqeeyaan shabakaddaasi.
Tiradii ugu badneyd ee faanta maroodiga oo sanadkan la qabtay
Faanta oo maroodiga laga soo jaro ayaa la sheegay inay sababtay hoos u dhac 20% oo tobankii sano ee ugu dambeeyay ku yimid maroodiga Afrika.
Ganacsiga sharci darrada ah ayaa waxaa dabka u sii huriyay dalabka ka imaanaya Shiinaha iyo koofurta Aasiya, halkaas oo faanta loo isticmaalo in laga sameeyo jijimaha, dhego dhegaha iyo wixii la midka ah.
Yang, iyo rag kale ayaa xabsiga la dhigay, kaddib markii lala xiriiriyay in si sharci darro ah ay dalka Tanzania uga dhoofiyeen 800 oo faanta maroodiga ah, intii u dhaxeysay sanadihii 2000 iyo 2014.
Ragga u dhashay Tanzania, ayaa si isku mid ah loogu xukumay 15 sano oo xabsi ah.
Maxkamadda Dares Salam, ee caasimadda dalkaasi Tanzania, ayaa amartay in hantida Yang lala wareego.
Muddo sanad ah ayaa baaritaan lagu hayay, waxaana la xiray sanadkii 2015-kii, kaddib markii lagu cayrsaday gaari xawaare sare ku socday.
Yang waxay ahayd ganacsato caan ah oo maqaayad ku leh Shiinaha, sidoo kalena shirkad maalgelin ku lahayd Dar es Salaam.
Waxay si fiican ugu hadashaa luqadda Sawaaxiliga, iyadoo ku nooleyd kana shaqeyneysay dalka Tanzania tan iyo sanadkii 1970-kii, waxayna madaxweyne ku-xigeen ka soo noqotay Golaha Ganacsiga Shiinaha ee Africa xaruntiisa dalka Tanzania.
Ololaha deegaanka ayaa soo dhaweeyay xarigga haweeneydaasi, sababtoo waxaa loo arkayay inay door weyn ku lahayd ka ganacsiga sharci darrada ah ee faanta maroodiga.
28 Daqiiqadood ka hor